COVID-19: व्यवसायहरूको लागि वफादारी कार्यक्रम रणनीतिहरु मा एक नयाँ हेराई Martech Zone
मङ्गलबार, अप्रिल 21, 2020 मङ्गलबार, अप्रिल 21, 2020 रक्षित हिरापारा
कोरोनाभाइरसले व्यापारको दुनियालाई उकास्दै छ र हरेक व्यवसायलाई शब्दमा नयाँ रूप लिन बाध्य पार्दैछ वफादारी.
कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट वफादारी विचार गर्नुहोस्। व्यवसायहरूले कर्मचारीहरू बाँया र दायाँ छोड्दैछन्। बेरोजगारी दर बढी हुन सक्छ कोरोनाभाइरस कारकको कारण 32% र घर बाट काम गर्दा प्रत्येक उद्योग वा स्थिति मिल्दैन। कर्मचारीहरूलाई त्याग्नु आर्थिक संकटको व्यावहारिक समाधान हो ... तर यसले वफादारीलाई प्रेम गर्दैन।
COVID-19 लाई असर गर्छ २ million मिलियन भन्दा बढी रोजगार र विश्वव्यापी अर्थतन्त्र जहाँसुकै कष्ट हुनेछ बीचमा tr १ ट्रिलियन र २ ट्रिलियन घाटा.
भर्चुअल स्ट्यान्डलको कारण घाटामा चल्ने व्यवसायहरूले कर्मचारीहरूलाई छुट दिने वा उनीहरूलाई कम तलबमा राख्ने वा अन्य वफादारी रणनीतिहरूको कसरत गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको सामना गर्नुपर्छ। यो कामदारहरूलाई जान दिन सजिलो हुन सक्छ ... तर महान कर्मचारीहरू फर्कने आशा नगर्नुहोस् यदि र जब तपाईंको व्यवसाय स्वास्थ्यमा फर्कन्छ।
CNBC ले यसलाई मूल्याses्कन गर्छ १ million करोड व्यवसाय विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको महामारीबाट प्रभावित छन्। व्यवसायहरू, विशेष गरी साना र मध्यम आकारका व्यक्तिहरूसँग धेरै नगद सञ्चय हुँदैन र होसियारीपूर्वक डिजाइन गरिएको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ वफादारी कार्यक्रम रणनीति न्यूनतम अवरोध सुनिश्चित गर्न। यो एक राम्रो सन्तुलन कार्य हो जुन तपाइँको वफादारी विशेषज्ञले सँगै राख्न र कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ।
बाह्य अवस्था जस्तोसुकै भए पनि ग्राहकहरूले असाधारण सेवाको अपेक्षा गर्छन्। यो महामारी तपाईको व्यवसायको लागि उपन्यास वफादारी रणनीति कार्यान्वयन गर्न को लागी सुन र अवसर मात्र हुन सक्दछ सेवा र सहानुभूति मा मात्र बिक्री भन्दा बढी ध्यान केन्द्रित। यदि तपाईं बेच्दै हुनुहुन्न भने अत्यावश्यक सामानहरू, तपाइँ ग्राहकहरूलाई अन्य रणनीतिका मार्फत व्यस्त राख्न सक्नुहुन्छ - सहित खेलहरू, भर्खरको अपडेटहरू प्रदान गर्ने, सुझावहरू प्रदान गर्ने आदि। तपाईको ब्रान्ड प्रासंगिक रहनु पर्छ, मूल्यको, र भाग लिन जारी रहनु पर्छ। यदि तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ भने, फोनमा अर्डरहरू स्वीकार गर्न र गृह डेलिभरी गर्न सुरू गर्नुहोस्।
जब व्यापार ढिलो हुन्छ, तपाइँ चाहनुहुन्न होला बढ्नु पुरस्कार अंक तर यी नगद-तानिएको समयमा, अर्जित बिन्दुहरूको छुटकाराको लागि रकमहरू कम गर्नाले तपाईंको ग्राहकहरूलाई राम्रो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ - र अन्तत: तपाईंको व्यवसाय जब उनीहरूले तपाईंको ब्रांडमा उनीहरूको वफादारी बढाउँछन्।
तपाईको वफादारी विशेषज्ञले तपाईलाई यी र ग्राहकहरूको लागि विविध प्रकारका वफादारी प्रोग्रामहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने देखाउने छ। ग्राहकहरु विचारशीलताको कदर गर्दछन्।
खुद्रा विक्रेता र थोक बिक्रेता वफादारी
COVID-१aएक अस्थायी अवरोध हो तर अझै पनि फुटबल विक्रेता र थोक बिक्रेताहरू बढी इन्भेन्टरी, कुनै कारोबार, र आफ्नो सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनको लागि थोरै राजस्वको साथ अटका छन्।
एक हेरचाह कम्पनी को रूप मा तपाईं यी कठिन समय को लागी सद्भावना कमाउन को लागी वफादारी रणनीति को एक नयाँ सेट को योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। एक तरीका भनेको भुक्तानी स्थगित गर्नु वा किस्त विधि प्रस्ताव गर्नु हो। सम्भवत: होम डेलिभरीबाट - तपाईं उनीहरूलाई अन्त्य सूचीमा प्रयोगकर्ताहरूको सूची सार्न मद्दतको लागि एक तरिका पनि खोज्न सक्नुहुन्छ।
जब लकडाउन सब्मिट हुन्छ, तपाईं कसरी वफादारी इनाम कार्यहरू समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ? यो समय समानुभूति र मानव कारक कुनै रणनीति को अगाडि राख्ने समय हो। यो दुबै आत्म-परीक्षण र तपाइँको खुद्रा विक्रेताहरू र थोक बिक्रेताको साथ कुराकानी गर्ने समय हो। यो समय बन्धनलाई सुदृढ पार्ने, भविष्यका लागि नयाँ विचारहरू विकास गर्ने, र सँगै काम गर्न तयार हुने समय हो।
जसरी तपाईं खुद्रा व्यापारी र थोक बिक्रेताहरूलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं पनि उस्तै विचार चाहनुहुनेछ आफ्नो विक्रेताहरु। लकआउट समाप्त भएपछि र बिक्री सुस्त भए पछि तपाईंको समर्थन तपाईंलाई गति प्राप्त गर्न मद्दतको लागि सहयोगी हुन्छ। वफादारी बनाउनुहोस् र तपाइँ तपाइँको विक्रेताहरु बाट क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाइँको नगदी प्रवाह लाई सहायता र तपाइँको ब्यापार स्वास्थ्य लाई छिटो फिर्ता फिर्ता मद्दत गर्न।
एक महामारीमा प्रतिष्ठा बिल्डिंग
सामाजिक सेवाहरू मार्फत तपाईंको प्रतिष्ठा निर्माण गर्नुहोस् जुन तपाईंको बिक्रीको साथ प al्क्तिबद्ध छैन। व्यवसाय हुन सक्छ र काम गर्न नसक्नेहरूको सेवा गर्न अघि आउनु पर्छ, पैसा बिना, बस्न ठाउँ छैन, र खाना छैन।
मानवीय गतिविधिहरू सम्भवतः तपाईबाट प्रभावित र अरू केहि धन्यवाद कमाउन सक्दछन्। यद्यपि यसले तपाईंको समग्र प्रतिष्ठामा ठूलो असर पार्न सक्छ। तपाइँका विक्रेताहरू, तपाइँका ग्राहकहरू, र कर्मचारीहरू, तपाइँलाई बिभिन्न बत्तीमा देख्नेछन्। र तिनीहरूको वफादारी बढ्नेछ।
पोष्ट कोरोनाभाइरस वर्ल्ड
महामारी कम हुन सक्छ तर प्रतिध्वनि टुंगिने छ र ब्यापारहरूले बहु-कथित वफादारी कार्यक्रम रणनीतिहरु पुनर्बहाली गर्ने सोच्नु पर्छ। यस्तो सम्भावना छैन कि उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरू स्प्लर्ज हुनेछ जब लकडाउन समाप्त हुन्छ किनकि विश्वको आर्थिक भविष्यको बारेमा अझै अनिश्चितता अझै छ।
ग्राहक वफादारी विशेषज्ञले नयाँ रणनीतिहरू विकास गर्न दिनुहोस् जसले सजीलै भुक्तानी विकल्पहरू, थप तत्काल पुरस्कारहरू र सेवाहरूको केही सेवाहरूको साथ खर्च गर्न मानिसहरूलाई ट्र्याकमा राख्दछ। ग्राहकहरुलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नुको मतलब तपाईले बिक्री मानिसहरूलाई प्रोत्साहन र प्रोत्साहन प्रस्ताव गर्नु पर्छ - उनीहरूले अधिक मूल्य प्रदान गर्ने अपेक्षासाथ। संचित घाटा र अल्छी अर्थतन्त्रको साथ व्यापारको गतिमा पुग्न कठिन हुनेछ। यस समयमा विक्रेता, ग्राहक र कर्मचारीहरू तपाईको उत्तम सम्पत्ति हुन्। पुनरुज्जीवित वफादारी कार्यक्रम आज अधिक खर्च हुन सक्छ ... तर भविष्यमा लाभांश भुक्तान गर्नेछ।
तिनीहरू भन्छन् कि सबै कारणको लागि हुन्छ। यदि महामारीले हामी कसरी बाँचिरहेका छौं, कसरी हामी सँगसँगै जान्छौं, र कसरी व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दछन् भन्ने परिवर्तन गर्दछ भने - त्यसो भए हामी अझ राम्रो संसारमा बाँच्न सक्दछौं। तपाईंको व्यवसायले यस अवस्थाको फाइदा लिनुपर्दछ र हाम्रो भविष्यका लागि उपयुक्त वफादारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। विशेषज्ञको सहयोगमा सोच्नुहोस् र छिटो कार्य गर्नुहोस् - र तपाइँ एक मुख्य सुरुवात प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: कोविड - १।ग्राहक वफादारीग्राहक वफादारी विशेषज्ञआर्थिक स .्कटअवधारणराजस्वविक्रेता वफादारी
Rakshit मा एक सामग्री मार्केटर हो वफादारी Xpert, भारतमा एक वफादारी कार्यक्रम कम्पनी। उहाँ वफादारी कार्यक्रम, मार्केटिंग, र ग्राहक अवधारणामा शानदार कौशलता राख्नुहुन्छ।